काठमाडौंमा घट्यो एक दिनमै २ डिग्री तापक्रम, — Imandarmedia.com
१गीता भित्र छ, जीवन जिउने र बुझ्ने सही सार, पढ्नुहोस् यी अंश
२पश्चिमी वायुको प्रभावले आज पनि देशभर मौसम बदली हुने
३विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ९ करोड ९७ लाख नाघ्यो
४सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बारको चेतावानी, विज्ञप्तिसहित
५ओली र प्रचण्ड-माधव, दुवै समूहलाई दलको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
६१४ गतेदेखि सुरु हुनेछ कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान
७प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्धा दर्ता
८क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, भए यस्ता निर्णय
९सकियो ओलीलाई कारवाही गर्न बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक, के-के भए निर्णय ?
१०ओलीमाथि पार्टीले बल्ल गर्यो यस्तो कडा कारवाही, साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशित
११तपाईंले चलाइरहेको सिमकार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? आजै यसरी चेक गर्नुहोस्, नत्र फस्नुहाेला…
१२सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच लफडा, के हाे लफडाकाे कारण ?
काठमाडौंमा घट्यो एक दिनमै २ डिग्री तापक्रम,
काठमाडौं । देशकाे संघिय राजधानी काठमाडाैं उपत्यकामा आज (शुक्रबार) बिहान हिजो-अस्ती भन्दा निकै चिसो महसुस गरिएको छ। बिहीबारभन्दा आज तापक्रम दुई डिग्री घटेकाले उपत्यकामा चिसो बढेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानांगका अनुसार उपत्यकाको आकाशमा बादल हटेसँगै चिसो बढेको हो। आज बिहान काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ।
हिजो उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ४ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। आज दिउँसो काठमाडौं उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम १९ डिग्रीसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच हुम्लामा कर्णाली नदीको पानी चिसोको कारण जम्न थालेको छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकासँग जोडिएको चीनसँगको सीमाक्षेत्र हिल्साको कर्णाली नदीमा बरफ जमेको हो। नदीको पानी चिसोले जम्दा हिल्सामा रहेका सुरक्षाकर्मी र घर कुरुवालाई समस्या भएको छ।
चिसो अत्यधिक बढेको हिल्सामा हाल तापक्रम घटेर माइनस १५ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। नाम्खा–५ हिल्सा क्षेत्रको कर्णाली नदीमा बरफ जमेको सशस्त्रका इन्चाजै प्रहरी निरीक्षक सुरज केसीले जानकारी दिए। नदीको पानी बरफ बन्दा नदी नै सेताम्मे देखिन थालेको।
पानी जमेकाले बरफमाथिबाटै नदी वारपार गर्न सकिने भएको छ। चिसोका कारण नाकामा बस्दै आएका सशस्त्र प्रहरी र घर कुरुवा व्यक्तिहरुलाई बाहिर निस्किनसमेत समस्या भएको केसीले बताए।हिल्सा क्षेत्र कर्णाली नदी नजिकै रहेकाले पनि हावाको वेगले बसिनसक्नुचिसो हुन्छ। अत्यधिक चिसो बढेपछि खानेपानीको धारामा समेत पानी जम्न थालेको छ ।‘तातो पानी तताएर हालेपछि मात्र धाराको
पानी आउँछ चिसोका कारण हातमुख धुन पनि कठिन भएको छ। अत्यधिक चिसोको कारण बिहान ११ नबज्दासम्म बाहिर निस्कन सकिँदैन,’ केसीले भने। यस्तै तराई क्षेत्रमा बिहान हुस्सु लाग्ने भएकोले सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अनाउनु महाशाखाले आग्रह गरेको छ । आज काठमाडाैं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १० दशलमव २ डिग्री सेल्सियस र अधिकतम तापक्रम २० दशमलव २ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।